Fijery Tsy Fantatra Momba Ny Fiainan’ny Tsy Manan-kialofana (SDF): Tantaran’i Stéphane, Francis sy SDF75 Ao Amin’ny Bilaogin’izy Ireo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Avrily 2016 5:34 GMT
Tranolain'ny Zanaky Don Quichotte eo amoron'ny tatatra Saint-Martin, Paris CC-BY-2.0
Marobe ny fitsarana an-tendrony momba ny andavan'andron'ireo tsy manan-kialofana (SDF). Anisan'ireo malaza indrindra ireto:
“Toe-javatra mampalahelo ao Frantsa”: sarotra ny manombana ny fitambaran'ny isan'ny frantsay SDF (tsy tafiditra ny mpitsoa-ponenana ao Calais) saingy tombanan'ny FNARS eo amin'ny olona 150 000 hatramin'ny 240 000 eo izany ary mihevitra kosa ny Fikambanana Abbé Pierre fa miampy 50 % ny tsy manan-kialofana ao Frantsa ao anatin'ny 3 taona ary ankizy ny 30 000.
“Dingana an-tsitrapo ny safidy ho lasa SDF”: mampiseho ny fikarohana fa 6% monja amin'ireo tsy manan-kialofana no misafidy hivelona eny an-dalambe.
“Tsy miasa ny tsy manan-kialofana”: Miasa amin'ny fe-potoana voafetra na vonjimaika ny maro amin'ireo SDF.
Mba hanehoana ny zavamisy mikasika ny tena andavanandron'izy ireo, SDF telo no milaza ny tantaran'izy ireo ao amin'ny tambajotra sosialy, amin'ny fomba fitenin'izy ireo manokana. Eto ambany, vaovao momba ny fiainan'i Stéphane, Francis ary SDF75 amin'ny alalan'ny bilaogin'izy ireo tsirairay.
Bilaogy iray manohitra ireo hevi-diso, avy amin'ny SDF75
Manazava ny antony namoronany bilaogy hafa i SDF75:
Inona no ilaina Tranonkala amin'ny maha SDF? Valiako tsotra hoe: Nahoana mihitsy? Mba ho lojika kokoa, lazaiko hoe talohan'ny naha-lasa SDF ahy, mpikirakira informatika aho tamin'ny voalohany ary te hanana ny tranonkalako manokana aho
Raha ametahana marika tsy izy (tsy mifandraika) na endrikendrehina ny sarangan'olona sasany, indrindra ny SDF, dia aza gaga raha ampiasaina ny endrika ivelany hafa tanteraka mba handravana izany…
Tsy nisalasala nanohitra ireo fitsarana an-tendrony i SDF75 tamin'ny famoahana sary “vono vorona” (araka ny teniny) ary hanome vaovao ara-potoana mikasika ny asany mpikirakira informatika sy ny fanatanjahantena ataony:
Niasa nandritra ny 13 taona mahery aho. Asa maharitra, na vonjimaika koa, izay nahafahako nanatontosa asa isankarazany, ary nandroso haingana koa tamin'ny fahaizana. Miampy ny asa ataoko ho an'ny olo-tsotra (manamboatra ny simba, manatsara, fametrahana Windows, fanamboarana endrika tiana manokana, ary tsy adino ny fanomezana fiofanana momba ny aterineto) manana traikefa eo amin'ny 16 taona eo aho. Ankehitriny, mandray RSA (volan'ny firaisan-kina) aho, ary mazava ho azy, mangataka eny an-dalambe aho. Eny, satria raha te hadio sy hivelona am-pahamendrehana, dia tsy mivelona amin'ny moraly, fa amin'ny karazan'olona…. Izay no nahafahako mihazona ny fahaizako.
SDF75 ao amin'ny efitra fanatanjahan-kozatra – pikantsary tamin'ny lahatsarin'ny bilaoginy
Ahoana no naha-lasa SDF ahy, mitantara i Stéphane
Maniry hizara ny fijoroany vavolombelona mikasika izay nitarika azy teny an-dalambe i Stéphane:
Voaraoka aho rehefa niasa ho mpamilin'ny tale, nanangana asa kely mipasoka mitety trano tao Paris aho. Natokako tamin'izany ny tahiriko sy ny heriko rehetra. Rehefa nanomboka nisosa tsara ny zava-drehetra, nisy zava-nitranga nampitsimbadika ny fianako. Nanapa-kevitra hisaraka tamiko ny vadiko ( nivady nandritra ny 7 taona izahay ary manan-janaka roa) satria te hanana fiainana marin-toerana kokoa izy. Rehefa niresaka momba izany nandritra ny andro maromaro sy niezaka nandresy lahatra azy aho mba hanohana ahy, dia tapa-kevitra ny handeha izy. Indray atoandro, nody tany an-trano, ary tsy nisy olona intsony tao, tsy nisy akanjo, fa hafatra manazava amiko ny fandehanany. Irery aho tao anatin'io trano fonenana banga io, tena mafy izany. Nandritra ny ora maromaro, nijanona tao amin'ny efitry ny ankizy miaraka amin'ny fahakiviako aho. Vokany: tsy niraharaha ny tenako aho, tsy nanao na inona na inona aho nandritra ny herinandro maromaro. Tsy misy intsony ny vola, tsy misy hofan-trano, ary indray andro, teny an'arabe.
SDF eny, fa olom-pirenena aloha voalohany indrindra, hoy i Francis
60 taona i Francis, SDF nandritra ny 15 taona izy. Manantena handray vola fanampiana ho an'ny be antitra izy atsy ho atsy mba hiova fiainana. Te-hanova ireo fitsarana an-tendrony momba ny fiainan'ny SDF i Francis. Iray amin'ireo fitsarana an-tendrony ny filazana fa tsy mahatsiaro tafiditra amin'ny fivoaran'ny fiarahamonina ankehitriny ny SDF. Manazava i Francis fa miadihevitra bebe kokoa momba ny politika noho ireo any an-toerankafa ireo tsy manan-kialofana:
Mihevitra ny olona fa tsy miraharaha izahay kanefa ao amin'ny filaharan-dasopy malaza, eny an-dalambe, miresaka indrindra momba ny fifidianana izahay! Tamin'ny taona 1998, nanokatra fisoratana anarana ao amin'ny lisi-pifidianana ho an'ny tsy manan-kialofana ny lalàna momba ny ady amin'ny fanilikilihana. Natokana ho an'ny olona mizaka zom-pirenena Frantsay, mizaka ny zo sivika sy mahavita mahazo fanamarinam-ponenana ny fifidianana. Ho an'ny ankamaroan'ny SDF, mila manana fonenana eny amin'ireny foibe ankatoavin'ny prefektiora ireny – Emmaüs, ohatra, mitantana trano fonenana 400. Saingy ny fahasarotan'ny toe-javatra ara-panjakana sy ny fari-piainana sarotra no mahatonga ny eny an-dalambe zara raha mifidy.
Hoy izy nanampy :
Tamin'ny taona 2002, nifidy an'i Jospin tamin'ny fihodinana voalohany aho. Chirac tamin'ny fihodinana faharoa. Tsoriko fa tsy mifidy an'i Pen aho. Mety nifidy an'i Sarkozy angamba aho tamin'ny 2007. Amin'izao fotoana izao, tsy ilaina intsony: fantatra ankehitriny fa tsy izy no hanampy ny mahantra. Tsy hampihena ny hantsana ara-tsosialy izy. Tahaka izany ihany koa i Hollande. Eo amin'ny ara-tsosialy, politika somary mitovitovy ihany no ataony: ny fampiantranoana vonjimaika amin'ny ririnina no ho ataony ary izay ihany. Tsy ampy ho an'ny olona eny an-dalambe izany.
Ao Frantsa, olona 3,6 tapitrisa: no na tsy manana trano fonenana manokana (olona 895 000), na miaina amin'ny fari-piainana tena sarotra (tsy misy igalabonana na hipoka olona ao an-trano) (olona 2 880 000), na ao anatin'ny fiantranoana an-tselika (trano fatoriana, karavana…) araka ny filazan'ny Fondation Abbé-Pierre. Tsy manan-kialofana telo ao anatin'ny folo no manana asa tsy maharitra amin'ny ankapobeny (fifanekena arak'asa amin'ny fe-potoana tsy maharitra, vonjimaika); ny hofan-trano lafo sy ny tsy fahampian'ny trano ara-tsosialy amin'ny vidiny mora no mahatonga azy ireo mbola eny an-dalambe.